विराटनगरमा थप ९६ जनामा काेराेना संक्रमण, कुन वडामा कति ? | Hamro Biratnagar
गृह पेज प्रदेश प्रदेश १ विराटनगरमा थप ९६ जनामा काेराेना संक्रमण, कुन वडामा कति ?
विराटनगरमा थप ९६ जनामा काेराेना संक्रमण, कुन वडामा कति ?
विराटनगर, २ साउन । आज विराटनगरमा ९६ जना संक्रमित थपिएका छन् । विराटनगर महानगरपालिका जनस्वास्थ्य अनुसार संक्रमित मध्य ३१ महिला र ६५ पुरुष गरी जम्मा ९६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन ।संक्रमण पुष्टि भएमा मध्ये ४९ जनाको वडा खुलेको छैन् ।
-विराटनगर १ मा १ जना
-विराटनगर २ मा १ जना
-विराटनगर ३ मा १ जना
-बिराटनगर ५ मा १ जना
-बिराटनगर ९ मा १ जना
-बिराटनगर ६ मा ३ जना
-बिराटनगर ७ मा २ जना
-बिराटनगर ८ मा १२ जना
-बिराटनगर १० मा ४ जना
-बिराटनगर ११ मा १२ जना
-बिराटनगर १२ मा ५ जना
-बिराटनगर १४ मा २ जना
-बिराटनगर १५ मा १ जना
-बिराटनगर १६ मा १ जना। यो सँगै विराटनगरमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६९१ पुगेको छ ।
मंगलबार प्रदेश १ मा १३९ संक्रमित थपिएका छन । मोरङमा १ सय ५, झापामा २०, सुनसरीमा ६, संखुवासभामा ३, उदयपुरमा २, पाँचथर र प्रदेश १ बाहिरका २ सहित प्रदेश १ मा जम्मा १३९ संक्रमित थपिएका छन् । यो सँग हालसम्मकै उच्च हो । संक्रमण देखिएका मध्ये ४२ महिला र ९७ जना पुरुष छन् ।
याे सँगै प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार २ सय ३२ पुगेको छ । डिस्चार्ज हुनेको संख्या १ हजार १ सय ३३ छ ।
अघिल्लो समाचारप्रदेश १ मा थपिए १३९ काेराेना संक्रमित
अर्को समाचार९६ कोरोना संक्रमित मध्य ४२ जना प्रहरी कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण : विराटनगर